कसरि सुरु भो #10YearsChallenge: र के हो यो ? – ePurbeli
कसरि सुरु भो #10YearsChallenge: र के हो यो ?
साथीसङ्गीसँग अन्तर्क्रिया र मनोरञ्जन गर्न सुरु भएको जस्तो देखिए पनि अनुहार चिन्ने प्रविधि परीक्षण र सुधार गर्न ठूला इन्टर्नेट कम्पनीहरूले नै यो ‘चुनौती’ चलाएको आशङ्का पनि गरिएको छ।
गुरुङले लेखेकी छिन्, “मलाई पुतली नकिनीकन बाबा मेरो लागि भलिबल, फुटबल र ब्याडमिन्टन खेल्ने सामग्री किनिदिनुहुन्थ्यो। म उहाँ लाई यसबारेमा सोध्थेँ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ‘म तिमीलाई छोरा जसरी हुर्काउन चहान्छु’… कस्तो रमाइलो सम्झना। अहिले स्थिति फरक छ तर सपना उही छ।”
‘दशवर्षे चुनौती’लाई कतिले समाज र व्यक्तिगत रूपमा आफूमा आएको परिवर्तन बुझ्ने मौकाका रुपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई समाजमा आएको परिवर्तन र आउन नसकेको सुधारका बारेमा व्यङ्ग्य गर्न पनि प्रयोग गरेका छन्।
फेसबुकमा प्रवीण भण्डारी एक रुपैयाँ र एक हजार रुपैयाँको नोटको तस्बिरमा ‘यही नोटले बाल्यकाल कटाइयो तर आज यो नोटले दिन काट्न पनि मुस्किल छ’ भन्दै सोध्छन – हो कि होइन?
डेटा वैज्ञानिक केट ओ’नेलले प्रसिद्ध वायर्ड पत्रिकाको अनलाइनमा लेख्दै यसको ‘अँध्यारो पक्ष’ हुनसक्ने बताइन्।
उनले लेखिकी छन्, “मान्नुहोस् कि तपाईँ अनुहार चिन्ने प्रविधिलाई उमेर अनुसार आउने फरकका बारेमा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई उमेर दाँजिएका धेरै तस्बिर चाहिन्छ… [यो ट्रेन्डले] थुप्रै मानिसहरूका पुराना र नयाँ तस्बिरलाई एकै ठाँउमा उपलब्ध गराउँछ।”
बीबीसी हिन्दी सेवाका अनुसार फेसबुकले यो ट्रेन्ड आफूले सुरु नगरेको बताउँदै ‘प्रयोग भएका तस्बिरहरू पहिल्यै फेसबुकमा रहेका तस्बिरहरू भएका कारण फेसबुकलाई यसले कुनै थप डेटा नदिने’ बताएको छ।